Tips for elderly in thingyan သက်ကြီးရွယ်အို - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သကွနျတှငျး ဥပုသျစောငျ့မယျ့ လူကွီးသူမတှအေတှကျ tips
မကွာမီ သကွနျတှငျး ကလညျး ရောကျလာတော့မယျ..တခြို့လူငယျတှကေ မနျးဒပျထိုငျတာ… ရပေကျခံထှကျတာ.. ခရီးသှားကွတာမြိူးတှေ ရှိကွသလို…တခြို့ကတြော့လညျး အိမျမှာ နားနားနနေေ နားကွတာမြိူးရှိပါတယျ….
လူကွီးအမြားစုကတော့ တရားစခနျးဝငျတာ…. ဥပုသျစောငျ့တာမြိူးလုပျကွပါတယျ….
ဒီတော့ ဒီ သကွနျတှငျးမှာ ဥပုသျသီလ ဆောကျတညျကွမယျ့ လူကွီးတှအေတှကျ ကနျြးမာရေးနဲ့ဆိုငျတဲ့ tip လေးတှေ ကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ….
(1) နပေူဒဏျကို သတိထားကာကှယျပါ
April ဆိုတာ…. မွနျမာပွညျရဲ့ အပူဆုံးလဖွဈပါတယျ… နပေူဒဏျပွငျးလှနျးတဲ့အတှကျ ဘုနျးကွီးကြောငျးသှားတာပဲ ဖွဈဖွဈ… အပွငျထှကျတာပဲ ဖွဈဖွဈ နရေောငျခွညျကို ကာကှယျဖို့လိုပါတယျ…. ထီးကိုမဖွဈမနဆေောငျသှားပါ…. နမေပွငျးတဲ့အခြိနျမြိုးမှာပဲ အပွငျထှကျပါ… နလေ့ညျ ဆယျ့တဈ နာရီခှဲလောကျကနေ ညနသေုံးနာရီလောကျအတှငျး အပွငျထှကျတာကို တနျနိုငျသမြှရှောငျပါ…..
အရိပျရတဲ့နရောမြိူးမှာ နားနားနနေေ နပေါ…..
(2) သီးစုံ ဓာတျဆားရညျသောကျပါ
နပေူလှနျးတဲ့အခါ ခန်ဓာကိုယျက တုနျ့ပွနျမှူအနနေဲ့ ခြှေးပိုထှကျပေးပါတယျ…. ထှကျသှားတဲ့ ခြှေးတှထေဲမှာ ရနေဲ့ဓာတျဆားတှေ ဆုံးရှူံးနိုငျတဲ့အတှကျ….သီးစုံဓာတျဆားအခြိုရညျတှကေို မကွာမကွာသောကျပေးသငျ့ပါတယျ…
(3) ညအခြိနျမှာလဲ အခြိုရညျသောကျပါ
ဥပုသျစောငျ့နတေဲ့အတှကျ ညစာကို အပွညျ့အဝ စားလို့မရပမေယျ့…. သှေးအခြိုဓာတျကတြာတို့… မူးမျောတာတို့ မဖွဈရလအေောငျ ညစာကိုလုံးဝမစားတာထကျစာရငျ….. အခြိုရညျဖွဈဖွဈ…. လတျဆတျတဲ့ သဈသီးဖြျောရညျဖွဈဖွဈ သောကျပေးသငျ့ပါတယျ…. ဥပုသျလဲမကြိူးပကျြသလို အစာအိမျနာတှေ… မူးမျောတာ….သှေးပေါငျကတြာမြိူးတှကေို မဖွသျအောငျ ကာကှယျ ပေးနိုငျမှာပါ….
(4) ရစေို အဝတျတှကေို ခကျြခငျြးလဲပါ
ဥပုသျသညျဆိုပမေယျ့…. အခြိနျအခါက..သကွနျတှငျးဖွဈတဲ့အတှကျ…. ဘုနျးကွီးကြောငျးကို အသှားအပွနျမှာ တခြို့ကလေးတှကေ ရပေကျတာ မတျောတဆခံရနိုငျပါသေးတယျ… နပေူပူနဲ့ ရအေေးနဲ့ထိတှတေဲ့အခါ လူငယျတှအေတှကျက သိပျပွသနာမရှိနိုငျပမေယျ့… လူကွီးတှအေတှကျကတြော့ ပူလိုကျအေးလိုကျအနအေထားဟာ ကနျြးမာရေးအတှကျ မသငျ့လြျောလှပါဘူး…. ဒါကွောငျ့ ကြောငျးသှားတဲ့အခါ ဝတျစုံအပိုတဈစုံထညျ့သှားတာ ကောငျးပါတယျ…. မတျောတဆ ရစေိုတဲ့အခါ လဲလှယျဖို့ အဆငျပွနေိုငျပါတယျ…
(5) သှေးပေါငျခြိနျကို ဂရုစိုကျပါ
လူကွီးသူမတှနေဲ့ တှဲတတျတဲ့ရောဂါတဈမြိူးကတော့… သှေးတိုးရောဂါပါပဲ…. ကိုယျဟာ နဂိုကတညျးက သှေးမကွာမကွာတိုးတတျသူဆိုရငျ နစေ့ဉျသောကျနကွေ သှေးပေါငျကဆြေးတှကေို ဂရုစိုကျပွီးသောကျပါ… အိမျမှာဖွဈဖွဈ… နီးစပျရာဆေးခနျးမှာဖွဈဖွဈ သှေးပေါငျမကွာခဏခြိနျပေးသငျ့ပါတယျ… ဘာလို့လဲဆိုတော့ နှရောသီ အပူရှိနျပွငျးတဲ့အခြိနျမြိူးမှာ လဖွေတျလဖွေနျးတာ… သှေးပေါငျခြိနျတကျတာမြိူး ပိုဖွဈနိုငျလို့ပါပဲ….
(6) ပှပှခြောငျခြောငျ အဝတျအစား တှေ ဝတျပါ
‌အဝတျအစား ကွပျကွပျတှဟော… ခြှေးထှကျတဲ့အခါ မကောငျးသလို… နရေထိုငျရလဲ ကွပျစမှောပါ… အဲဒီအစား ပှပှခြောငျခြောငျ ခညျြထညျ အဝတျအစားတှကေ ပိုသငျ့လြျောမှာပါ….
သကြန်တွင်း ဥပုသ်စောင့်မယ့် လူကြီးသူမတွေအတွက် tips
မကြာမီ သကြန်တွင်း ကလည်း ရောက်လာတော့မယ်..တချို့လူငယ်တွေက မန်းဒပ်ထိုင်တာ… ရေပက်ခံထွက်တာ.. ခရီးသွားကြတာမျိူးတွေ ရှိကြသလို…တချို့ကျတော့လည်း အိမ်မှာ နားနားနေနေ နားကြတာမျိူးရှိပါတယ်….
လူကြီးအများစုကတော့ တရားစခန်းဝင်တာ…. ဥပုသ်စောင့်တာမျိူးလုပ်ကြပါတယ်….
ဒီတော့ ဒီ သကြန်တွင်းမှာ ဥပုသ်သီလ ဆောက်တည်ကြမယ့် လူကြီးတွေအတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ tip လေးတွေ ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်….
(1) နေပူဒဏ်ကို သတိထားကာကွယ်ပါ
April ဆိုတာ…. မြန်မာပြည်ရဲ့ အပူဆုံးလဖြစ်ပါတယ်… နေပူဒဏ်ပြင်းလွန်းတဲ့အတွက် ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်… အပြင်ထွက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် နေရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ဖို့လိုပါတယ်…. ထီးကိုမဖြစ်မနေဆောင်သွားပါ…. နေမပြင်းတဲ့အချိန်မျိုးမှာပဲ အပြင်ထွက်ပါ… နေ့လည် ဆယ့်တစ် နာရီခွဲလောက်ကနေ ညနေသုံးနာရီလောက်အတွင်း အပြင်ထွက်တာကို တန်နိုင်သမျှရှောင်ပါ…..
အရိပ်ရတဲ့နေရာမျိူးမှာ နားနားနေနေ နေပါ…..
(2) သီးစုံ ဓာတ်ဆားရည်သောက်ပါ
နေပူလွန်းတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်က တုန့်ပြန်မှူအနေနဲ့ ချွေးပိုထွက်ပေးပါတယ်…. ထွက်သွားတဲ့ ချွေးတွေထဲမှာ ရေနဲ့ဓာတ်ဆားတွေ ဆုံးရှူံးနိုင်တဲ့အတွက်….သီးစုံဓာတ်ဆားအချိုရည်တွေကို မကြာမကြာသောက်ပေးသင့်ပါတယ်…
(3) ညအချိန်မှာလဲ အချိုရည်သောက်ပါ
ဥပုသ်စောင့်နေတဲ့အတွက် ညစာကို အပြည့်အဝ စားလို့မရပေမယ့်…. သွေးအချိုဓာတ်ကျတာတို့… မူးမော်တာတို့ မဖြစ်ရလေအောင် ညစာကိုလုံးဝမစားတာထက်စာရင်….. အချိုရည်ဖြစ်ဖြစ်…. လတ်ဆတ်တဲ့ သစ်သီးဖျော်ရည်ဖြစ်ဖြစ် သောက်ပေးသင့်ပါတယ်…. ဥပုသ်လဲမကျိူးပျက်သလို အစာအိမ်နာတွေ… မူးမော်တာ….သွေးပေါင်ကျတာမျိူးတွေကို မဖြသ်အောင် ကာကွယ် ပေးနိုင်မှာပါ….
(4) ရေစို အဝတ်တွေကို ချက်ချင်းလဲပါ
ဥပုသ်သည်ဆိုပေမယ့်…. အချိန်အခါက..သကြန်တွင်းဖြစ်တဲ့အတွက်…. ဘုန်းကြီးကျောင်းကို အသွားအပြန်မှာ တချို့ကလေးတွေက ရေပက်တာ မတော်တဆခံရနိုင်ပါသေးတယ်… နေပူပူနဲ့ ရေအေးနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါ လူငယ်တွေအတွက်က သိပ်ပြသနာမရှိနိုင်ပေမယ့်… လူကြီးတွေအတွက်ကျတော့ ပူလိုက်အေးလိုက်အနေအထားဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် မသင့်လျော်လှပါဘူး…. ဒါကြောင့် ကျောင်းသွားတဲ့အခါ ဝတ်စုံအပိုတစ်စုံထည့်သွားတာ ကောင်းပါတယ်…. မတော်တဆ ရေစိုတဲ့အခါ လဲလှယ်ဖို့ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်…
(5) သွေးပေါင်ချိန်ကို ဂရုစိုက်ပါ
လူကြီးသူမတွေနဲ့ တွဲတတ်တဲ့ရောဂါတစ်မျိူးကတော့… သွေးတိုးရောဂါပါပဲ…. ကိုယ်ဟာ နဂိုကတည်းက သွေးမကြာမကြာတိုးတတ်သူဆိုရင် နေ့စဉ်သောက်နေကြ သွေးပေါင်ကျဆေးတွေကို ဂရုစိုက်ပြီးသောက်ပါ… အိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်… နီးစပ်ရာဆေးခန်းမှာဖြစ်ဖြစ် သွေးပေါင်မကြာခဏချိန်ပေးသင့်ပါတယ်… ဘာလို့လဲဆိုတော့ နွေရာသီ အပူရှိန်ပြင်းတဲ့အချိန်မျိူးမှာ လေဖြတ်လေဖြန်းတာ… သွေးပေါင်ချိန်တက်တာမျိူး ပိုဖြစ်နိုင်လို့ပါပဲ….
(6) ပွပွချောင်ချောင် အဝတ်အစား တွေ ဝတ်ပါ
‌အဝတ်အစား ကြပ်ကြပ်တွေဟာ… ချွေးထွက်တဲ့အခါ မကောင်းသလို… နေရထိုင်ရလဲ ကြပ်စေမှာပါ… အဲဒီအစား ပွပွချောင်ချောင် ချည်ထည် အဝတ်အစားတွေက ပိုသင့်လျော်မှာပါ….
‌Dr. စိမ်းမိုးစက် <
မမဗိုက်​တို့ သင်္ကြန်​ကာလတွင်း ဥပုသ်​ ​စောင့်​သင့်​ မ​စောင့်​သင့်​?